सपनामा मन्दिर गएको देख्नु हुन्छ ? यस्तो हुनसक्छ कारण पढ्नुस – Superhit News
कहिलेकाहिँ, मन्दिरको सपनालाई अलौकिक शक्ति र ‘भगवान’ले मानिससँग अन्तरक्रिया गर्न खोजिरहेको छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। सपनामा मन्दिर देख्दा भगवानले तपाईँलाई दिनुभएको आशिर्वादको बदलामा ‘धन्यवाद’ दिन बाँकी छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले, आफ्ना अतीतलाई याद गर्नुहोस्। कतै तपाईँले मन्दिरमा गएर केहि कुराको ‘भाकल’ पो गर्नुभएको थियो कि? यदि त्यस्तो बाँकी छ भने, कुनै बिलम्ब नगरी भाकल गरेको मन्दिर जानुहोस् अनि ऋण चुक्ता गर्नुहोस्।
कहिलेकाहिँ, मन्दिरको सपना देख्दा तपाईँलाई कसैले संरक्षण गरिरहेको छ अथवा कसैले तपाईँलाई आश्वासन दिइरहेको छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। मनोवैज्ञानिक हिसाबले हेर्नुपर्दा, जब तपाईँ दुविधामा पर्नुहुन्छ अनि कसैको सहाराको आश गर्नुहुन्छ भने सपनामा मन्दिर देख्नुहुन्छ। यसको मतलब तपाईँलाई कसैले सुरक्षा दिएर राखिरहेको छ भन्न सकिन्छ र तपाईँले आफ्ना सबै पीर-चिन्तालाई भुलेर जीवनमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ धार्मिक हुनुहुन्छ अनि भगवानप्रति विश्वास गर्नुहुन्छ भने नजिकैको मन्दिरमा गएर भगवानको दर्शन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, ताकी तपाईँको विश्वास अझ बलियो होस्।
हुन त, यस्तो सपनाले कुनै ठोस अर्थ र व्याख्या बोकेको हुँदैन, तैपनि व्यक्तिगत परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई बुझ्ने कोशिस गर्नु महत्वपूर्ण हुन आउँछ। आखिर सपना पनि त तपाईँकै मनको कुरा त हो। के थाहा त्यसलाई बुझ्दा कुनै एउटा ठूलो प्रश्नको उत्तर पो भेट्न सकिन्छ कि? फेरि तपाईँ कत्तिको धार्मिक हुनुहुन्छ भन्ने कुराले पनि यस्तो सपनाको अर्थमा प्रभाव पर्दछ। यदि तपाईँ भगवानप्रति पुरा विश्वास गर्नुहुन्छ भने यस्तो सपना देखेको बेलामा तपाईँको जीवनमा के-कस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् भनेर बुझ्दा तपाईँको अवचेतन मनले तपाईँलाई के भन्न खोजिरहेको छ भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ।
← उदित नारायण झा भन्छन् ‘संसारलाई थाहा छ म नेपाली हुँ’ !
मासु समेत कालो हुने महँगो कडकनाथ कुखुरा जसको दाम सुनेर तपाइँ झस्किनु हुन्छ →